Devdaha Tv | जीवनशैली
किमोथेरापी कारण किन हुन्छ मृत्यु ?
५० वर्षीया गरिमालाई जब आफुलाई ब्लड क्यान्सर छ भन्ने थाहा भयो, पहिला त उनलाई पत्याउनै गाह्रो भयो । आफुलाई यति ठुलो रोग लागेको छ भन्ने कुरा विश्वास गर्न गाह्रो हुनु स्वभाविकै हो । तर, सबै टेस्ट पोजिटिभ आएपछि सही उपचारबाट निको हुन्छ भन्ने उनले सोचेकी थिइन् । उनको हिम्मत र साहस नै थियो, जसले उनलाई उपचारको लागि अगाडि बढ्न प्रेरित गरेको थियो । तर किमोथेरापीले उनको हौसलालाई यति कमजोर बनाइदियो, क्यान्सर भएको ६ महिनामा उनका नै मृत्यु भयो ।
किमोथेरापीको कारण उनी विस्तारै–विस्तारै कमजोर हुँदै गएकी थिइन् । उनको शरीरको हरेक अंगहरु बिग्रदै गएको थियो र उनले जिन्दगीको लडाई नै हारिन् । २० प्रतिशत मात्र क्यान्सर सेल्स हुँदा पनि जिन्दगी हार्नुको कारण के हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा २९५ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि
जाडो मौसममा किन बढ्छ प्रदूषण ?
कार्तिक २८ देखि बालबालिकालाई फाइजरको खोप लगाउने